Haddii waddankaagu uusan ku hadlin Ingiriisiga, moobiilka OS ee ugu badan waa Android | Wararka IPhone
Haddii waddankaagu uusan ku hadlin Ingiriisiga, OS-ga ugu badan ee moobiilku waa Android
Maaha wax lala yaabo: Isbaanishka Android Android ayaa xukumayay sanado ahaan nidaamka ugu weyn ee mobilada ku shaqeeya. Waa badan tahay, saamiga suuqa waligiis hoos ugama dhicin 80 boqolkiibaama. Xogtaan, waxaa hada lagu daray in qaab la raacayo taas oo kuxiran luuqada looga hadlo wadankaaga, waxay u janjeeri doontaa hal nidaam ama mid kale. Waxaa la fahansan yahay in barxada kale ee aan tilmaameyno ay tahay Android.
Sida lagu sheegay daraasad ay daabacday shirkadda QalabkaAtlas, waxaa jira laba suuq oo si cad loo kala duwanaaday: Ku hadalka Ingiriiska iyo ku hadalka Ingiriiska. Taasi waa, haddii aysan weli ku filnayn midka fiican "iOS vs Android", hadda waxaa lagu daray su'aashan taas Waxay kuxirantahay afkaaga hooyo - ama wadanka, halkii - doorbidida dhanka barxad waa mid ama midkale.
Daraasadda waxaa weheliya miisas kala duwan oo aan ku arki karno, runtii, in farqiga u dhexeeya hal madal iyo mid kale ay aad u ballaaran yihiin. Sidaa darteed, waddamada sida Australia, Kanada, Mareykanka, Boqortooyada Midowday, iyo Jabbaan, nidaamka hawlgalka ugu badan waa iOS. Daaran suuqyada kale - waddamada - sida Spain, Kolombiya, Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga, Argentina, Brazil, Masar, Hindiya, Booland, Koonfur Afrika, Nayjeeriya, Ruushka ama Malaysia, nidaamka hawlgalka ugu badan waa Android.
Dhinaca kale, sidoo kale waa xaq in la tilmaamo taas Saamiga suuqa ee Android ee Spain ayaa hoos u dhacay kaliya hal sano. Sida ay tilmaamayaan daraasadda, deyrtan waxay gaareysaa boqolkiiba 4,2. Dhanka kale, xogta ugu xiisaha badan waxay ku jirtay Hindiya; waddankan in saamigiisa suuqa uu yahay Android (in ka badan 70 boqolkiiba oo ay ku nool yihiin qiyaastii 1.300 milyan oo qof), IOS ayaa ka tagtay booska labaad ee qiimeynta iyadoo loo doorbidayo seddexaad - iyo cusub - ciyaaryahan.
Waxaan tixraaceynaa nidaam qalliin oo ku dhex jira qalab kale oo cusub oo Nokia ah. Waxaan tixraacay KaiOS, oo ah barxad aad ka heli karto Nokia 8110-ka cusub isla markaana gaadha boqolkiiba 15 saamiga suuqa. Tani waxay ka tagaysaa macruufka boqolkiiba 9,6 boqolkiiba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Haddii waddankaagu uusan ku hadlin Ingiriisiga, OS-ga ugu badan ee moobiilku waa Android
Asal ahaan waa in wadamada ku hadla af-ingiriisiga mushaharku ka sareeyo oo ay si sahal ah u heli karaan dhamaadka, (iyo jagooyinka lagu bixiyo inta udhaxeysa € 800-1000 ee terminal ka fiican kan Apple mid laga qaato) wadamada aan Iyagu waa kuwa ku hadla Ingiriisiga (gaar ahaan kuwa Isbaanishka ku hadla) waxay leeyihiin mushahar ka hooseeya waana inay hagaajiyaan baaxadda ay ku xirnaan doonaan marka loo eego waxa ay shaqaystaan ​​iyo Android waxay leedahay qiime kala duwan, mid fudud oo fudud
Asal ahaan afar daanyeer oo daafaha dunida ah sida iPhone-ka oo kale oo lacagta qof walba soo galo waxba kuma laha ee waa xayaysiinta la siiyay sheyga iyo sida bulshada looga arko.
Opera VPN ayaa leh macsalaameyn, laakiin halkan waxaad ku haysaa waxyaabo kale
Ka dib afar sano oo hoosku ku jiray, iPad-ku wuxuu ku soo noqday madashii iibka Apple